Akụkọ - Igba aji site na mgbe niile
Maka ụmụ nwoke
1 Agụba Maka Menmụ nwoke
2 Agụba Maka Menmụ nwoke
3 Agụba Maka Menmụ nwoke
4 Agụba Maka Menmụ nwoke
5 Agụba Maka Menmụ nwoke
6 Agụba Maka Menmụ nwoke
Maka ụmụ nwanyị
1 Agụba Maka Womenmụ nwanyị
2 agụba Maka Womenmụ nwanyị
3 Agụba Maka Womenmụ nwanyị
4 Agụba Maka Womenmụ nwanyị
5 Agụba Maka Womenmụ nwanyị
AKW EDKWỌ AKWGEKWỌ AKW .KWỌ
AH RA RAZOR
Maka .mụ nwoke
Na-akpụ akpụ site na ọgbọ
Ọ bụrụ n ’ị chere ngbalị ụmụ nwoke na-ewepụ ntutu ihu bụ nke ugbu a, anyị enwetala ozi ọma maka gị. Enwere ihe akaebe nke mgbe ochie na, na Oge Nkume, ụmụ nwoke na-akpụ afere, ndị na-ahụ anya, ma ọ bụ ndị na-agba mbọ, ma ọ bụ na-eji ya eme ihe dịka tweezers. (Ouch.)
Ka oge na-aga, ụmụ nwoke nyochachara ọla kọpa, ọla kọpa na ígwè. O nwere ike ịbụ na ndị ọgaranya nwere onye ga-akpụ isi na ya, ebe anyị niile gara na nke onye na-akpụ isi. Ma, bido n’uwa mgbe oge gwụrụ, ị nwekwara ike ị garala onye na-akpụ isi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwa ahụ, ịmịnye mmadụ ọbara ma ọ bụ ezé ọ bụla ewepụtara. (Nnụnụ abụọ, otu nkume.)
N'oge na-adịbeghị anya, ụmụ nwoke jiri agụba kwụ ọtọ, nke a na-akpọkwa "akpịrị-akpịrị" n'ihi na ọfụma, nke pụtara ìhè. Ọdịdị ya dịka mma pụtara na a ga-eji okwute ma ọ bụ eriri akpụkpọ anụ mee ka ọ dị nkọ, wee chọọ nka dị ukwuu (ịghara ịkọwa laser dị ka elekwasị anya) iji.
GN Mere anyị ji malite ịgba aji na ebe mbụ?
Maka ọtụtụ ihe, ọ na-apụta. Ndị Ijipt oge ochie na-akpụ afụ ọnụ ha na isi ha, ikekwe n’ihi okpomọkụ ma eleghị anya dị ka ụzọ isi gbochie akụrụngwa. Ọ bụ ezie na e lere ya anya dị ka ihe na-enweghị isi na-eto ntutu ihu, ndị Fero (ọbụlagodi ụfọdụ ụmụ nwanyị) nwere afụ ọnụ ụgha iji inomie chi Osiris.
Ndị Gris mechara kuchaa afụ ọnụ ha n’oge ọchịchị Alexander Onye Ukwu. A gbasoro omume ahụ n'ụzọ zuru oke dị ka ihe nchebe maka ndị agha, na-egbochi ndị iro ijide afụ ọnụ ha n'ọgụ na aka.
Ejiji ejiji ka obu ugwo pasent?
Mụ nwoke nwere mmekọrịta ịhụnanya-ịkpọasị na ntutu ihu site na mmalite oge. Kemgbe ọtụtụ afọ, a hụwo afụ ọnụ dị ka ihe na-adịghị mma, mara mma, mkpa okpukpe, ihe ịrịba ama nke ike na ịdị ike, ihe ruru unyi, ma ọ bụ nkwupụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ruo mgbe Alexander Onye Ukwu, ndị Greek oge ochie na-egbutu afụ ọnụ ha naanị n'oge iru uju. N'aka nke ọzọ, ụmụ okorobịa ndị Rome n'ihe dịka 300 BC nwere nnọkọ “ịkpụ afụ ọnụ” iji mee emume ntorobịa ha na-abịanụ, ma na-eto naanị afụ ọnụ ha mgbe ha na-eru uju.
N’oge Julius Caesar, ndị nwoke Rom itatedomiri ya site n’ịkpụ afụ ọnụ ha, mgbe ahụ Hadrian, Emperor nke Rome si n’afọ 117 ruo 138, weghachitere afụ ọnụ ahụ ka ọ dị mma.
Ndị isi US 15 mbụ enweghị afụ ọnụ (ọ bụ ezie na John Quincy Adams na Martin Van Buren gbara ụfọdụ muttonchops dị egwu.) Ekem Abraham Lincoln, onye nwe afụ ọnụ kachasị ama oge niile, hoputara. Ọ malitere usoro ọhụụ-ọtụtụ ndị isi na-eso ya nwere ntutu ihu, ruo mgbe Woodrow Wilson na 1913. Kemgbe ahụ, ndị isi anyị niile asachaala. Maka gịnị? Kpụ ntutu abịawo ogologo oge.
Post oge: Nov-13-2020
Mba 77 ChangYang Road, JiangBei District, Ningbo, China